Biiroon Barnootaa Oromiyaa Qabxiin Qormaata Biyyaaleessaa kutaa 12ffaa dogoggora waan qabuuf akka sirreeffamu gaafate - NuuralHudaa
On Aug 15, 2019 3
Qabxii Qormaata biyyooleessaa kutaa 12ffaa kibxata ibsame irratti komiin guddaan ka’aa jiraatuu gabaasne ture. Biiroon barnootaa naannoo Oromiyaatis Qabxiin qormaata biyyaaleessaa tibbana ifa ta’e gosa barnoota ‘apitittude’n qabxiin galmaa’e dogoggora waan qabuuf akka sirratuuf gaafate.
Hogganaan Biiroo Barnootaa Oromiyaa Dr. Tolaa Bariisoo “qabxiin barattoota kuma 5 ta’anii qormaata gara dhumaatti kennaman sadan irratti sirrii akka hin turre waan bira geenyeef qabxichi akka haqamu ejjennoo qabnu barreeffamaan Ejensii Qormaata Biyyoolessaafi Ministeera Barnootaa beeksifnee jira” jedhe.
Haluuma Kanaan qormaatichi irra deebiin akka Ilaalamuu fi akkasumas qabxiin barattoota kuma shanii deebii qormaataa argatanii jiru jedhamees akka haqamuu qabus kan gaafatame tahu ibse.
Ammatti garuu qabxiin barattoota Oromiyaa gadi bu’eera jedhamee wanti odeeffamaa jiru dhugaa irraa kan fagaatedha. Qabxiin waliigalaa yeroo itti aanutti ifa ni taasifamas jedhe Dr. Tolaan.
May 16, 2022 sa;aa 9:50 pm Update tahe